American Sign Language Bahasa Indonesia Cebuano Čeština – Czech Deutsch - German English Español - Spanish Français - French Italiano - Italian Papiamentu Polski - Polish Português - Portuguese Tagalog Tiếng Việt - Vietnamese русском - Russian فارسی - Farsi हिन्दी - Hindi বাংলা লিপি Bangla lipi தமிழ் - Tamil ქართული - Georgian 한국어 - Korean 日本語 - Japanese 简体中文 - Simplified Chinese
पाठ १: संसारलाई के हुँदैछ ?
तपाईं कसरी सत्यता चिन्‍न सक्‍नुहुन्छ ? संसार कसरी शुरू भयो ? संसारमा के गल्ती भयो ? के संसारको निम्ति केही आशा छ ?
Bahasa Indonesia Cebuano Čeština – Czech Deutsch - German English Español - Spanish Français - French Guarani Italiano - Italian Papiamentu Português - Portuguese Tagalog Tiếng Việt - Vietnamese русском - Russian فارسی - Farsi हिन्दी - Hindi বাংলা লিপি Bangla lipi தமிழ் - Tamil සිංහල - Sinhala ქართული - Georgian 한국어 - Korean 日本語 - Japanese 简体中文 - Simplified Chinese
पाठ २: परमेश्‍वरको विषयको सत्यता के हो ?
परमेश्‍वरको विषयको सत्यतालाई तपाईंले किन जान्‍नुपर्छ ? परमेश्‍वरको विषयको सत्यतालाई तपाईंले कसरी जान्‍न सक्‍नुहुन्छ ? परमेश्‍वर केजस्तो हुनुहुन्छ ? परमेश्‍वरलाई तपाईंले कसरी आराधना गर्नुपर्छ भनी तपाईं चाहनुहुन्छ ?
पाठ ३: जीवन के हो ?
तपाईं किन जन्मिनुभयो ? तपाईं कसरी परमेश्‍वर जस्तो हुनुहुन्छ ? तपाईं कसरी परमेश्‍वर जस्तो हुनुहुन्‍न ? तपाईं कस्तो प्रकारको व्यक्ति हुन चाहनुहुन्छ? तपाईं परमेश्‍वरका बालक हुनुहुन्छ भनी कसरी तपाईं थाहा पाउन सक्‍नुहुन्छ ?
पाठ ४: तपाईं कसरी आफ्नो सबैभन्दा ठूलो खाँचो पूरा गर्न सक्‍नुहुन्छ ?
तपाईंको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता के हो ? येशू ख्रीष्‍टले कसरी तपाईंको सबैभन्दा ठूलो खाँचोलाई पूरा गर्न सक्‍नुहुन्छ ? के येशू ख्रीष्‍ट तपाईंका मुक्तिदाता हुनुहुन्छ ? तपाईंका अरू आवश्यकताहरू बारे के-कस्तो होला त ?
Select Language አማርኛ - Amharic Bahasa Indonesia Cebuano Čeština – Czech Deutsch - German English Español - Spanish Français - French Guarani Italiano - Italian Papiamentu Português - Portuguese Tagalog Tiếng Việt - Vietnamese русском - Russian فارسی - Farsi हिन्दी - Hindi বাংলা লিপি Bangla lipi தமிழ் - Tamil සිංහල - Sinhala ქართული - Georgian 한국어 - Korean 日本語 - Japanese 简体中文 - Simplified Chinese
पाठ ५: मृत्युपछि के हुन्छ ?
मृत्युपछि के ? स्वर्ग र नरक कस्ता छन् ? तपाईंको छनोट कति महत्वपूर्ण छ ? तपाईं कसरी स्वर्ग जानसक्‍नुहुन्छ ?
पाठ ६: सच्‍चा एकलेसिया (चर्च) के हो ?
एकलेसिया वा चर्च वा मण्डलीको अर्थ के हो ? सच्‍चा एकलेसियाले के गर्छ ? किन एकलेसियाको अधीनमा रहनुपर्छ ? एकलेसियालाई के के हुँदैछ ?